Magangalyo-doonka - macluumaad cusub oo la daalacdo updated | USAHello | USAHello
macluumaad Halkan waxaa updated ah dadka magangalyo doonka ah oo soo socda inuu Maraykanka.
January 7, 2020 - magangalyo doonka Mexico loo diri karaa ilaa soohdinta Maraykanka ee Guatemala.
magangalyo-doonka ka El Salvador iyo Honduras Qaar ka mid ah ayaa durba la soo diray in Guatemala saraakiisha Mareykanka ee xadka Mexico-Texas ee El Paso iyo Rio Grande Valley. The Department of Homeland Security sheegay in hadda Mexico la soo diray waxaa laga yaabaa in sidoo kale. magangelyo doonka ah waxay yeelan doonaan si ay u weydiiso ilaalinta ee Guatemala halkii Maraykanka. Qorshahan waxaa ka mid ah carruurta iyo sidoo kale dadka waaweyn.
Tallaabooyinkan waxay yihiin qayb ka mid ah heshiiska US a la Guatemala yeedhay Heshiiska Guatemala ee Cooperative Asylum (ACA). Dowladda Mareykanka ayaa ka dhigay heshiisyada la midka ah la Honduras iyo El Salvador.
Si looga fogaado loo diray Guatemala, magangelyo doonka ah waa in marka hore ay sheegayaan in ay ka cabsaneysid dhibaato ama jirdil ee Guatemala. Markaas waa in ay caddeeyaan in ay u badan tahay in lagu dhibaateeyo ama jirdilay markii ay halkaas ka heli.
US Immigration iyo Customs Enforcement (ICE) ayaa sidoo kale lagu soo diraya qaar ka mid ah magangalyo-doonka Mexico dib si Mexico ka fog soohdinta. Tani waa qeyb ka mid ah heshiiska US a la Mexico yeedhay celinta Gudaha Initiative.
September 28, 2019 - laba updates dadka magangelyo doonka ah:
1) amar garsoore oo federal joojiyo sharci cusub oo ku saabsan dadka lagu hayo carruurta iyo qoysaska magangelyo ee dalka Mareykanka.
Judge Dolly Gee Maxkamadda Federaalka ee Degmada ee Degmada Dhexe ee California ayaa sheegay in on September 27 in maamulka isbedel ku amar ku ogolaansho jira ma samayn karaan (heshiiska), oo la yidhaahdo Heshiiska Flores ah.
Heshiiska Flores ayaa sheegaya in caruurta aan la qaban karaa in lagu hayo muddo ka badan 20 maalmood. Xukuumaddu waxa ay sheegtay on August 21 in Department of Homeland Security loo ogolaan in ay sii qoysaska magangalyo doonaya carruurta leh ee lagu hayo ilaa ay lagu siiyo magangelyo ama masaafurin. Laakiin Judge Gee ayaa sheegay in, "Heshiiska dejinta Flores ayaa weli ku jira saamayn iyo ma ayaa la joojiyo."
2) Garsoore ayaa maxkamadda federaalka ee District of Columbia joojiyey qorshe kale oo dawladda ah oo ku saabsan masaafurinta.
Xaakim Degmo Ketanji Brown Jackson ee Washington, DC, ayuu yiri on September 27 in xukuumaddu aysan u balaarin lahaayeen musaafurinta dhakhso-track, loo yaqaan kaxaynta dedejiyey. In July, Dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in ay sii kordhayaan kaxaynta degdeg ah si codsan oo dhan USA si ay dadka aan sharciga lahayn oo aan caddayn karaan ay dalka ugu yaraan laba sano. Laakiin garsooraha ayaa sheegay in dadka aan laga mustaafurin karin ilaa ay lahaayeen dhagaysi.
Dowladda Maraykanka ayaa labada go'aannada kuwaas oo ka doodid doonaa. Laakiin hadda, dowladda waa in ay raacaan maxkamadaha’ go'aannada.
Maxkamadda Sare ee Mareykanka ayaa go'aan muhiim ah. Maxkamadda ayaa go'aansaday Maraykanka dhihi karaa ma jiro in dadka magangalyo doonka ah, kuwaas oo u yimid inuu xadka Mareykanka iyada oo dal kale. Hadda, dadka ka codsan kartaa oo keliya magangelyo xadka Maraykanka haddii ay loo diiday magangalyo waddan kale jidka.
Dowladda Maraykanka ayaa soo jeediyay this sharci cusub oo ku saabsan July 16. Tan iyo markaas, garsoorayaasha Mareykanka ayaa joojiyay xukunka loo isticmaalay. Waxaa jira ururo dagaalka ka dhanka ah xeerkan in maxkamadaha Mareykanka. Laakiin Maxkamadda sare ayaa sheegay in xukuumaddu ay bilaabi kartaa adigoo isticmaalaya xeerka cusub ee hadda, ka hor inta kiisaska maxkamadda ayaa la go'aansaday. United States Citizenship and Immigration Services The (USCIS) ayaa sheegay in ay u bilaaban doonaa iyadoo la adeegsanayo xeerka sida ugu dhaqsaha badan.
Xeerkani wuxuu ka dhigan tahay in dadka magangalyo doonka ah ka Bartamaha iyo Koonfurta America, kuwaas oo u safray iyada oo Mexico ma awoodaan in ay codsi magangelyo noqon doonaa. Haddii aad codsato magangelyo xadka Mareykanka, aad la jeedsaday kartaa dacwad la'aan, haddii aad magangalyo waydiistay Mexico ama dal kale oo ku saabsan safarka, waxaana la diiday. xeerka cusub Tani waxay khusaysaa carruurta iyo sidoo kale dadka waaweyn.
Yaa qaanuunka cusub ma khuseeyaan?
Xeerka cusub ee ma khuseeyo qof kasta doonka ee xadka Mareykanka iyo Mexico:
Waxaa ma khuseeyo haddii aad tahay muwaadin reer Mexico.
Waxaa ma khuseeyo haddii aad caddeyn karto in aad loo diiday magangalyo jidka soohdinta Maraykanka.
Waxaa ma khuseeyo haddii aad caddeyn karto in aad tahay dhibane ka ganacsiga dadka.
Waxaa ma khuseeyo haddii aad hore u joogtay Maraykanka.
Read faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan CLINIC FAQs bogga.
A maxkamadda federaalka ee Maraykanka ayaa amar ku bixiyay in xukuumadda in ay joojiso hordhaca ah ee xeerka cusub. xukunka ayaa sheegay in dadka magangalyo doonka ah uu yimid xuduudda-US Mexico waa in marka hore weydii magangalyo wadan kale ay u safray iyada oo ay waddo.
Xeerka cusub (arki July 16) mar hore la joojiyay in California iyo Arizona. xukunka maanta ka dhigan tahay in saraakiisha xuduuda ee Texas iyo New Mexico waa in sidoo kale ay sii wadaan si ay u aqbalaan dhammaan codsiyada ka magangalyo-doonka.
US Department of Homeland Security iyo Waaxda Caafimaadka iyo Adeegyada Aadanaha ee la daabacay isbedel in xeerarka ku saabsan dadka lagu hayo carruurta iyo qoysaska magangelyo ee dalka Mareykanka.
Under xeerarka hadda, carruurta oo aan la hayn karaa xarumaha dadka lagu hayo muddo ka badan 20 maalmood. Xeerarka cusub ayaa u ogolaan lahaa Department of Homeland Security in ay sii qoysaska magangalyo doonaya carruurta leh ee lagu hayo ilaa ay lagu siiyo magangelyo ama masaafurin. Xeerarka cusub ayaa aan weli la ansixiyay. Waxaan casriyeyn doona macluumaadkaaga this ugu dhakhsaha badan.
Waxaad ka akhrisan kartaa xeerarka la soo jeediyay in theFederal Register.
maxkamada Maraykanka ayaa sheegay in dowladda Mareykanka ay ku qori kartaa meel sharci cusub oo ku saabsan magangalyo dalalka qaar ka mid ah, laakiin aan dadka kale ee.
Xeerka cusub (arki July 16 hoos ku) oo waxay ku yidhaahdeen in dadka magangalyo doonka ah uu yimid xuduudda-US Mexico waa in marka hore weydii magangalyo wadan kale oo u safray iyada oo jidka.
maanta, saddex garsoore go'aan maxkamadda US a of Appeals ee San Francisco. Tani Court of Appeals daboolayaa Degmada Ninth ah, oo ay ku jiraan California iyo Arizona. Garsoorayaasha ayaa sheegay in USA waa in ay sii wadaan si ay u aqbalaan dhammaan codsiyada ka dadka magangalyo doonka ah ee California iyo Arizona, xitaa haddii aysan magangalyo waydiistay waddamada kale. Laakiin USA ku diidi kartaa inay aqbalaan codsiyada magangelyo ka muhaajiriinta imanaya xuduudda-US Mexico ee Texas ama New Mexico haddii muhaajiriin ah ayaa diiday magangalyo waddan kale ama dalalka jidka.
garsoorayaasha ma uusan sheegin waxa uu xaq u leeyahay ama sharci u ahayd Mareykanka si uu u diido codsiyada magangelyo. Waxa ay nagu yiraahdeen ma jirin macluumaad ku filan si loo joojiyo sharci cusub guud ahaan dalka oo dhan. Ururada taageera magangalyo doonka ku hawlan yihiin sidii ay u bixiyaan macluumaad dheeraad ah in xeerka cusub ayaa ka soo horjeeda sharciga US.
garsoorayaasha ayaa’ talada haya hab in, hadda, dadka soo socda iyada oo Mexico ayaa weli codsan kartaa magangelyo xadka Mareykanka ee California iyo Arizona. Laakiin haddii ay codsato magangelyo xadka Mareykanka ee Texas ama New Mexico, waxay iska soo noqon kartaa dacwad la'aan (haddii loo diiday magangalyo waddan kale).
Todobaadkii hore ee dowladda Maraykanka ayaa ku dhawaaqay a "heshiis dal saddexaad oo amaan ah" la Guatemala.
Heshiiska Tani waxay khusaysaa dadka xuduudda-US Mexico magangelyo ee USA. Haddii muhaajiriin baxay Guatemala ku saabsan safarka iyo ma waxaa magan galyo u doonato, oo markaas ayan waydiisan kartaa magan galyo ee dalka Mareykanka.
Waxaa jira dad badan oo Guatemala iyo USA kuwii odhan heshiiska halis gelin doonaa muhaajiriin. Waxaa jiri doona caqabado maxkamadaha ee labada dal. Isla mar ahaantaana, Waaxda Homeland Security sheegay in ayaa rajeynaya inuu saxiixaa heshiisyada la mid ah dalalka kale, lugu daro Mexico, Honduras, El Salvador, Panama, iyo Brazil.
Waa maxay heshiiska this macnaheedu dadka magangelyo doonka ah?
Heshiiska ayaa ka dhigan tahay in haddii aad timaadid xadka Mareykanka ka dib markii iyada oo Guatemala, aad looma ogolaan doono inay magangalyo dalbadaan. halkii, waxaad dooran kartaa in ay ku noqdaan Guatemala ama dalkaaga hooyo.
Heshiiskani inta badan saamayn doonto dadka ka soo El Salvador iyo Honduras. Waxaa wax saameyn ah kuma Guatemala. Guatemala iyo wax kasta oo kale oo cabsaneysaa in lagu dhibaateeyo in Guatemala waa in wareysi ay la yeelatay saraakiisha Mareykanka si ay u arkaan haddii ay xaq u doonka si uu u doondoono ee USA waxay leeyihiin.
Congress Guatemala waxa uu leeyahay in la ansixiyo heshiiska ka hor inta aanay bilaabmin. Haddii ay ansixiyaan, heshiiska waxaa loo isticmaali karaa laga bilaabo in dhowr toddobaad.
Xeer Ilaaliyaha Guud ee Mareykanka ayaa ka dhigay go'aan cusub oo ku saabsan magangalyo sababta oo ah xubin qoyska.
Sharciga cusub ayaa sheegay in dadka la kulmi karaan cadaadis ay dalka sababta oo ah xubin qoyska ay magangelyo ma raadsan kartaa in USA ay sabab in. sharciga magangelyada ayaa sheegay in dadka ka raadsan kartaa magangelyo haddii ay yihiin xubno ka mid ah “koox bulsho oo gaar ah.” Ilaa hadda, dadkan ayaa waxaa ka mid ahaa oo lagu beegsaday sababta oo ah xubin qoyska. Laakiin Xeer-ilaaliyaha Guud Barr ayaa sheegay in xubin qoyska ma tirin.
Haddii qof qoyskaaga soke ayaa dhibane hanjabaad, rabshad ama silec, ma waxaad isticmaali kartaa in sida sabab magangelyo si uu u doondoono ee USA.
Mareykanka ayaa sheegay in July ee 16 qaanuunka ku saabsan magangalyo-doonka aan xalaal ahayn.
xukunka ayaa sheegay in dadka magangalyo doonka ah uu yimid xuduudda-US Mexico codsan kartaa kaliya magangalyo xadka Maraykanka haddii ay diiday magangalyo waddan kale jidka. Laakiin Garsoore Jon Tigar ee San Francisco xukuntay in USA waa in ay sii wadaan in aan aqbalno sheegashada ka dadka magangelyo doonka ah xitaa haddii aysan magangalyo waydiistay waddamada kale. Waxa uu sheegay in xukunka uusan buuxin sharciyada American iyo in ilaa Congress waxay ahayd in go'aan kan codsan kartaa magangelyo.
qisaasta ah ayaa la micno ah in dadka soo socda iyada oo Mexico ayaa weli codsan kartaa magangalyo marka ay gaaraan USA.
Dowladda Maraykanka ayaa ku dhawaaqday July 22 in ay sii kordhaya tirada kaxaynta Deg-deg ah, laga bilaabo maanta.
ka saarida dedejiyey macnaheedu waa in dadka ka soo USA celiyo si deg deg ah. Laga bilaabo maanta, waxay codsan karaan oo dhan USA si ay dadka sharci kuwaas oo dalka ka yar laba sano.
Waxaad ka akhrisan kartaa ogeysiis ka Department of Homeland Security.
Waa maxay tan micnaheedu magangalyo-doonka iyo muhaajiriinta aan la diiwangelin?
Tani “dhakhso-track” habka loola jeedaa dadka aan helin dhagaysiga maxkamadda hor inta aan la masaafurin. Waxaa ma khuseeyo dadka magangalyo doonka ah, dadka deegaanka xalaal, ama qaxootiga. Haddii lagu xiro, maxaa yeelay, aad tahay sharci iyo aad rabto in aad magangalyo, sharax in aad uga cabsaneyso inay ku laabato dalkaagii hooyo. Markaas sarkaalka xadhiga waa in aad u dirto sarkaalka magangalyo for a “cabsi lagu kalsoonaan karo” wareysi.
Waxaad baran kartaa badan oo ku saabsan ka saarida dedejiyey. Waxa kale oo aad ka akhrisan kartaa badan oo ku saabsan xuquuqda aad leedahay iyo dheeraad ah oo ku saabsan magangalyo.
Maanta waxaa jira xeer cusub oo loogu talagalay dadka magangalyo doonka ah in ay soo socda USA.
The Department of Homeland Security iyo Department of Justice ayaa sheegaya in dadka magangalyo doonka ah uu yimid xuduudda-US Mexico waa in marka hore weydii magangalyo wadan kale ay u safray iyada oo ay waddo. Waxay ku weydiin karaan oo kaliya magangalyo xadka Maraykanka haddii ay diiday magangalyo waddan kale jidka.
xeerka cusub Tani waxay khusaysaa carruurta iyo sidoo kale dadka waaweyn. Waxaa ma khuseeyo haddii aad caddeyn karto in aad loo diiday magangalyo Guatemala ama Mexico, ama haddii aad caddeyn karto in aad tahay dhibane ka ganacsiga dadka.
Mareykanka ayaa sheegay in bishii April ee 2019 Si by Xeer-ilaaliyaha Guud waa sharci darro ah. Garsooraha ayaa sheegay in dadka magangalyo doonka ah waa in aan la qaban muddo aan la cayimin.
Si Xeer-ilaaliyaha Guud ee ahayd sabab u bilowdo July. Amarkan ayaa sheegay in dadka magangalyo doonka ah qaar ka mid ah kuwaas oo muujiyay “cabsi lagu kalsoonaan karo” yeelan doonaan in ay joogaan lagu hayo ilaa dhageysiga magangalyada. (Waxaa jira ku dhawaad 900,000 Xaaladaha sugaya dhageysiga socdaalka, oo intuu kor u qaadi karto si aad 3 sano kiiska magangelyada ee loo qabto.) Laakiin garsooraha ayaa sheegay in amarka waa sharciga US. Waxay sheegtay in tahriibayaal xaq u leedahay in dacwadda.
nidaamka xuquuq dhowrka leh waxaa loola jeedaa dadka magangelyo doonka ah waxay xaq u leeyihiin in ay maxkamada socdaalka go'aan ka gaarto haddii ay tahay in la qabto ama lagu sii daayay dammaanad. Tan waxa loo yaqaan dhagaysiga dammaanad. Garsooraha ayaa sheegay in dadka magangalyo doonka ah waa in la siiyaa dhegeysiga curaarta.
Dowladda Maraykanka uusan rabin dadka magangalyo doonka ah in la sii daayo, halka ay sugaan. Haddaba sidaas daraaddeed ayaa Department of Justice racfaan ka qaadan doonto go'aanka garsoorka.
Dowladaha Maraykanka iyo Mexico ayaa sheegay in ay la ballaariyo ka Protocols Protection Migrant (“Remain ee Mexico” siyaasadda).
Dadka magangelyo ee USA waxaa lagu soo celiyo Mexico sida ay sugto kiisaskooda si loo hawl maxkamadaha socdaalka US. Xeerka ayaa loo isticmaalaa San Diego iyo Calexico ee California iyo El Paso, Texas. Dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in ay isticmaali doonaan nidaamka ay dekadaha dheeraad ah ee laga soo galo on xadka Mareykanka iyo Mexico. Xukuumadda Mexico ayaa sheegay in ay ku siin doonaan dadka magangalyo doonka ah oo sugaya in Mexico daryeelka caafimaadka, oggolaanshaha shaqada, iyo waxbarashada.
Kooxaha xuquuqda madaniga odhan hab maamuuska waa khatar ah iyo khalad. Waxay ku yidhaahdeen siyaasada awgeed ay adag tahay, waayo, dadka magangalyo doonka ah si aad u hesho caawimaad sharci ay u baahan yihiin. Waxay rafcaan ka xeerarka cusub ee maxkamadaha Mareykanka.
Waxaad ka akhrisan kartaa faahfaahin dheeraad ah ka CLINIC oo ku saabsan “Remain ee Mexico.” Waxa kale oo aad ka arki kartaa macluumaadka DHS bogga oo ku saabsan hab-ka.
Xeer Ilaaliyaha Guud ee Mareykanka ayaa sheegtay in laga yaabo in qaar ka mid ah magangalyo-doonka aan codsado in la sii daayo, halka ay sugaan dhagaysi magangalyada.
Si Tani ma bilaabi ilaa July 2019. Si cusub ayaa codsan karaan in ay dadka ka dhigay codsi guul lagu kalsoonaan karo cabsi. Xeer-ilaaliyaha Guud ayaa sheegay in, ka dib markii lagu hirgalinaayo “cabsi lagu kalsoonaan karo oo ah cadaadis ama jirdil,” magangelyo doonka ah, kuwaas oo noqon doona u qalmin in la sii daayo dammaanad. Read si Xeer Ilaaliyaha Guud ee.
Ka dib markii July 2019, haddii aad ka gudubto wareysi cabsi macquul ah oo loo oggolaaday ka saarista, laga yaabaa in aad ku sii hayo inta aad sugto kiiskaaga la maqlo. Si cusub Taasi ma khuseyso in ay caruurta aan cidina wehelin ama qoysaska carruurta leh.
Waxaan kuu sheegi doonaa haddii uu jiro war badan oo ku saabsan si this.
The Department of Homeland Security ayaa bilaabay in ay “Protocols Protection Migrant” at xadka Mareykanka iyo Mexico.
Dadka magangelyo doonka ee isgoyska xadka San Ysidro laga yaabaa in lagu soo celiyaa Mexico oo ay leeyihiin in ay jirto sugaan illaa ay arjiga la farsameeyo. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay dowladda Mexico ilaalin doono dadka halka ay sugaan. Siyaasadda cusub ma khuseeyo carruurta aan lala socon (carruurta ka yar 18 sano jir kuwaas oo aan dadka waaweyn) ama in muwaadiniin reer Mexico.
Taas macnaheedu waxa weeye dawlada Mareykanka waxay u noqon doontaa dadka magangalyo doonka ah in ay Mexico intii ay sugi dhagaysi (aadidda maxkamadda si aad u aragto xaakinka). magangelyo doonka ah waxaa loo oggol yahay in ay u soo galeen USA ee dhageysiyada ay. dhageysiga ugu horreeya ee waa in ay ahaataa gudahood 45 maalmood, ka dibna waxaa laga yaabaa in dhagaysiga dacwadaha ka badan. Dowladda ayaa sheegtay in ay tahay inay qaataan go'aan hal sano gudahood. Read war Migrant Protection Protocols ka Department of Homeland Security.
Waxaa ku saabsan tahay 800,000 codsiyada magangelyo doonka ku sugayeen in la warshadeeyey. Taas macnaheedu waxa weeye sugidda ah oo dhowr sano oo loogu talagalay dadka hoose ee liiska. Dadka ku sugaya in Mexico si hoose ee liiska tegi maayo. Laakiin waxa ay noqon doontaa adag tahay in iyaga si aad u hesho qareen Mareykan ah si ay u caawiyaan.
Xitaa ka dib markii dheer ayaad sugi, codsiyada magangelyo ugu yihiin diiday. Dad aad u yar lagu siiyo magangelyo.
Nidaamkan waxaa loo yaqaan “Electricity.” Waxaa loola jeedaa oo kaliya tiro go'an oo ah dadka ku sugaya xuduuda ah waxaa loo ogol yahay in aad dalbato maalin kasta. Isticimaalay waxaa loo isticmaalaa dekadaha kale ee laga soo galo, aad. Baro möre oo ku saabsan geedi socodka ka Warbixin ay dhawaan soo.
Ku dhawaaqista ayaa sidoo kale sheegay in dadka ku sugaya in Mexico yeelan doontaa helitaanka qareenka socdaalka iyo in USA ee dhagaysiga maxkamadda ay. Laakiin oo kaliya tiro yar oo ah dadka magangalyo doonka ah wuxuu heli doonaa magangelyo ah ee dhegaysiga ay. Inta kale lagu masaafurin doonaa. Read dhawaaqay buuxa oo ka socda Department of Homeland Security.
December 19, 2018 - laba updates:
Mareykanka ayaa hor istaagay isbedel xeerka magangalyo sameeyey June.
on June 11, 2018, Xeer-ilaaliyaha Guud ee hore ee US Jeff Kulamo ayaa sheegay in dadka ka soo cararaya rabshadaha qoyska ama rabshadaha burcad dalalkoodii hooyo aan guud ahaan loo oggolaan doonaa inay magangalyo dalbadaan in America. Laakiin on December 19, Judge Emmet Sullivan ayaa sheegay in xeerka cusub uu ahaa mid sharci darro ah. Waxa uu sheegay in muhaajiriintan waxaa weli loo ogol yahay inaad codsato magangelyo.
Waa maxay go'aanka garsoorka macnaheedu soogalootiga?
Waxaa loola jeedaa in aad xaq u leedahay inaad codsato magangelyo USA sababo rabshada baandada iyo rabshadaha qoyska waxay leeyihiin. Waxaad xaq u leedahay in la maqlo ka hor inta aad soo tarxiilay. Laakiin go'aanka sameeya ma macnaheedu codsigaaga waa la siin doonaa. Dad aad u yar lagu siiyo magangelyo.
Xaakim Degmo Maraykanka ee California ayaa sii block on amarka madaxweynaha sameeyey November.
Bishii November, Madaxweynaha Trump saxiixay sharci cusub leh oo magangalyo doon ah oo keliya u taga inay dekedda Maraykanka ah ee laga soo galo codsan kartaa magangelyo. on November 19, Garsoore Jon Tigar joojiyay sharci cusub, oo wuxuu ku yidhi waxay ahayd sharciga US. Haddaba xaakinka ayaa amar in weli ganaax ka dhanka ah xeerka.
Waa maxay amarka garsoorka macnaheedu dadka magangelyo doonka ah?
reebitaan ayaa ka dhigan ganaaxay garsoore ee ku saabsan xeerka cusub ee sii wadi doonaa. Waxaa loola jeedaa Maraykanka waa in loo farsameeyo sheegashada magangalyo ka dadka xataa haddii aanay soo dekedda ah ee laga soo galo. Laakiin talada haya waxan sameeya ma ka dhigan tahay in magangelyo la siin doonaa. Waxaa weli waa mid aad u adag si aad u hesho magangelyo ee USA.
USAHello taageera xuquuqda dadka magangalyo doonka ah in aad weydiisato ilaalinta ee dalka Mareykanka.
November 19, 2018 update: A Xaakim Degmo Mareykanka ayaa hor istaagay amarka madaxtooyada ilaa December 19.
Garsooraha ayaa sheegay in amarka madaxweynaha uu ka hor Maraykanka’ sharciga. sharciga Mareykanka ayaa sheegay in dadka ku saabsan ciidda American xaq u leedahay in aad dalbato magangalyo. Waxa aan odhan ma ay u leeyihiin in ay soo galo ee dekeda. on November 19, garsooruhu wuxuu sheegay in Mareykanka waa in ay raacaan sharciga.
Maxay this xukunka cusub?
Xukunka ayaa on November 19 ka dhigan tahay Maraykanka waa in loo farsameeyo sheegashada magangelyo dadka uma iman dekedda ah ee laga soo galo. Xukunka ayaa sheegay in dadkan waa in la oggol yahay in ay dalban. Laakiin talada haya waxan sameeya ma ka dhigan tahay in magangelyo la siin doonaa. Waxaa weli waa mid aad u adag si aad u hesho magangelyo ee USA.
Madaxweynaha Trump ayaa saxiixay amar in la xaddido dadka magangalyo doonka ah oo ku saabsan soohdinta koonfureed ee dalka Mareykanka. Sharciga cusub ayaa sheegay in dadka magangalyo doonka ah waa in ay dekedda Maraykanka ah ee laga soo galo tago.
Xeerka bilaabi doonaa habeenbadhkii on Friday, November 9. Waxay qaadataa 90 maalmood. Xeerka cusub ee ma khuseeyo carruurta aan lahayn qof weyn.
Waa maxay tan micnaheedu dadka magangelyo doonka ah oo ku saabsan soohdinta koonfurta?
isbedelka Taas macnaheedu waxa weeye, in haddii ay soo galaan Maraykanka meel kasta marka laga reebo dekadda ah ee laga soo galo, waxay xaq uma laha in aad weydiisato magangalyo. waxaa laga yaabaa in ay helaan badbaado gaar ah sababtoo ah “cabsi macquul ah” (ka yar rubuc ka mid ah dadkan u hesho). Laakiin dadka intooda badan la masaafurin doono. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan cabsi macquul ah oo cabsi lagu kalsoonaan karo.
Waa maxay xeerka cusub loogu talo galay dadka hore u yihiin in US doonka ah?
Xeerka cusub uusan saamayn ku lahayn dadka horay gudaha Mareykanka ama dadka timaado on November 9 ka hor saqdii dhexe.
qaanuunkan mar kale beddeli doonaa?
Shuruucda Mareykanka ayaa sheegaya in tahriibayaal dalban kartaa magangelyo marka ay ku jiraan ciidda American, Si kastaba ha ahaatee iyo meel kasta oo ay ku soo gashay. Sidaas kooxaha xuquuqda madaniga la dirirayaan sharci cusub.
Waxaa uu ahaa isbedel sharciyada dadka magangelyo doonka ah oo soo socda inuu Maraykanka. on June 11, 2018, Xeer Ilaaliyaha Guud ee Mareykanka Jeff Kulamo ayaa sheegay in dadka ka soo cararaya rabshadaha qoyska ama rabshadaha burcad dalalkoodii hooyo aan guud ahaan loo oggolaan doonaa inay magangalyo dalbadaan in America.
Isbeddelkan ayaa inta badan saameeyaa dadka magangalyo doonka ah haddii aad ayaa u imanaya xadka u dhexeeya Mexico iyo Maraykanka. Waxaa hubaal in aad ka timid dal halka ay rabshado burcad sameynayo nolosha khatar ka iman. Ama waxaad laga yaabaa in qof dumar ah oo ka tagay guriga rabshad si aad naftaada iyo caruurtaada amaan sii. Xeerarka cusub odhan magangelyo ma waxaad ka heli kartaa sababo kuwa.
Waxa hada aad u adag si aad u hesho xaalad magan galyo ee America. magangalyo-doonka intooda badan aan la aqbali. Sharciga wuxuu leeyahay dhexdeeda inaad doonataan magangelyo haddii aad ka cabsan cadaadis maxaa yeelay,:
• xubinimada koox bulsho gaar ah
• aragti siyaasadeed
Xataa haddii aad soo socda mid ka mid ah sababahaas, waxay noqon kartaa adag si ay u caddeeyaan in laga xoreeyo dalka. Immigration and Customs Enforcement (ICE). Read page dowladda si ay u badan oo ku saabsan xeerarka u bartaan for doonka.
Maxaa dhici doona igu haddii aan imaado oo ku taala xuduuda doonka ah mid ka mid ah sababahaas?
Dhamaan dadka magangelyo doonka ah kuwaas oo magangelyo-doonka waa in ay fahmaan in iyaga la qabtay waxaa laga yaabaa in ay dawladda Maraykanka (qasbay in ay sii joogaan xarunta dadka lagu haayo) toddobaadyo badan. Dadka qaar ayaa la soocay carruurtooda marka ay yimaadaan on soohdinta. Tan iyo June 20, this lama oggola. Waxaa jira kooxo ka shaqeeya Mareykanka si ay uga caawiso waalidiinta heli carruurtooda. Laakiin waxaa jira qof aad u yar samayn karto si aad adiga ama carruurtaada ku caawin haddii aad horay u hayaan dawladda Maraykanka.
Waxaad u baahan tahay in aad weydiisato qareen. In Maraykanka, waxaad xaq u leedahay inaad qareen, laakiin waa in aad codsato qareen. Waxaad u baahan tahay in la yidhaahdo, “Waxaan doonayaa in aan hadda qareen inuu hadlo.” Ka dhig weydiinaya qof kasta oo aad la hadasho qareen ilaa aad waxaa la siiyaa in ay helaan qareen.
Maxaa dhacaya haddii aan mari aan waraysi? Waxaan weli la xirayaa?
Haddii aad dhaaftay wareysi magangelyo (loo yaqaan “cabsi lagu kalsoonaan karo” wareysi) waxaad ka heli doontaa dhagaysi hore ee garsooraha si kiiskaaga magangalyo. Waxay qaadan kartaa waqti aad u dheer si aad u hesho dhagaysi. Waa in aad la sii daayo xabsiga inta aad sugayso.
Si kastaba ha ahaatee, xarumaha dadka lagu hayo qaar ka mid ah waxaa haysta dadka magangelyo doonka ah xitaa ka dib markii ay Marayaan iyagoo wareysi. on July 2, Garsoore federaalka ah ayaa sheegay in ICE waa ma qaban dadka magangalyo doonka ah ay wareysi ka dib markii aan sabab wanaagsan. Haddii lagu qabtay ka dib markii aad ka gudubto waraysigaaga, codsataa in aad qareen la hadasho.
Mararka qaarkood, caruurta magangalyo doonka ah ayaa la soocay waalidkood.
Haddii aad kala maqan laga waalidkaa ama ilmaha halka doonka, wac laga xoreeyo dalka ah. Immigration and Customs Enforcement (ICE) lagu hayo warbixinta khadka macluumaadka ee 1-888-351-4024. Waxaa jira shaqeeya Isbanishka ku hadla laga heli karaa oo waa adeeg lacag la'aan ah. Saacadaha yihiin Isniinta ilaa Jimcaha 8:00 a.m. in 8:00 p.m. (Eastern Time). Haddii aad ka soo wacayso gudaha xarunta lagu hayo ICE ah, dial isticmaalka xawaaraha 9116# on boosteejo ah call free.
ICE Xafiiska dejinta Qaxootiga ka shaqeeya (ORR) in ay helaan carruurta. Waxa kale oo aad sameyn kartaa in wac Khadka Waalidka ORR at 1-800-203-7001 haddii aad aaminsan tahay dawladda Maraykanka ayaa ilmahaaga. Haddii aad ka soo wacayso xarunta lagu hayo ICE ah, dial isticmaalka xawaaraha 699# on boosteejo ah call free. Available 24 saacadood maalintii, 7 maalmood toddobaadkii, in Isbaanish ama English.
Waxaad (ama saaxiibadaa, qoyska ama qareen) sidoo kale la xiriiri kartaa ICE ama ORR by email:
Asylum ee USA: nidaamka cusub ee USCIS
lagu hayo Immigrant: caawin shaqsiyaadka codsanaya magangelyo
Macluumaadka on this page ka timaadaa CLINIC, ka Department of Homeland Security, ka Register Federaalka, USCIS oo kale ku kalsoon tahay ilaha. Waxaa loogu talagalay hanuun iyo waa la cusboonaysiiyaa inta badan ee suurtogalka. USAHello ma siiyo talo sharci ah, mana ka mid ah waxyaabaha aannu loogu tala galay in la qaado, sida la-talin sharci. Haddii aad raadineyso qareen lacag la'aan ah ama qiime jaban ah ama caawimaad sharci, waxaan kaa caawin karnaa hesho adeegyada sharci oo bilaash ah iyo qiimo-yar.